Sheeko gaaban.( Qaybta 1aad) | Awdalpress.com	Qoraalo | Tacliiq Raaci | E-mail / Home
Sheeko gaaban.( Qaybta 1aad)
Waxa Daabacay staff-reporter on Nov 20th, 2012 and filed under Daily Somali News, OPINION.
Both comments and pings are currently closed.	Awdalpress – London – Shabakadda awdalpress.com waxa ay maanta iyo maalmo kaleba idiin soo gudbinaysaa sheeko run ah oo ku dhacday nin ay axsaab ahaayeen qoraaga sheekada, laakiin qoraha sheekadani ka gaabsaday in uu magaciisa saxda ah shaaciyo. Balse uu jeclaystay in uu akhristayaasha shabakadda u soo bandhigo sheeko uu uga sheekeeyey oo ku dhacday ninkaasi.
Sheekadiina waa tani ee la soco:
Xilligu waa Xagaa, ninka aan sheekadiisa ka sheekaynayana waxa aan wada joognay dal ka mid ah waddammada Khaliijka. Had iyo jeer marka aan habeenkii ka soo guryo hoyanno makhaayadaha lagu hor sheekaysto, suuqyada amma masaajidda waxa aan ku sheekaysan jirray fadhiga guriga aan wada gallo oo aan ku wadaageyney rag kale oo Somali ah, isla markaana aan guriga kuwada noolayn. Sheekadana waan ku daahi jirray, gaar ahaan maalinta aan la shaqo tageyn barrito oo kale ayaan aad ugu soo jeedi jirray sheekooyinka Xirsi.
Ninkan oo aan u bixinayo Xirsi ayaa ahaa nin aad u sheeko macaan, had iyo jeerna waxa uu ka sheekayn jiray muqammaraadkii uu soo maray iyo maalmihii ay ugu darrayd noloshiisa. Amma waxa uu noo furi jiray dood cilmi ah, waxana uu ahaa aqoon yahan bartay luqadda Englishka iyo cilmiga bulshada.
Xirsi waxa aan ku xasuustaa ixtiraam, akhlaaq wanaagsan, run sheeg iyo deeqsinnimo uu eebbe ku mannaystay. Marka aan fadhiga guriga isugu nimaadna waxa uu na weydiin jiray in aan wax soo cunnay iyo in kale. Isaga oo weliba aniga si gaar ii dhaqaalaynaya, waayo waxa aan ku jiray marxalad shaqo la’aaneed, waxana dhici jirtay in aan habeennada qaar seexdo casho la’aan. Oo sida ah ay dadku dibadda uga soo cunaan aanan dibadda waxba ka soo cuni jirin inta badan.
Habeennada qaar waxa uu guriga iman jiray isaga oo cunto sida, uguna tala galay in asxaabta guriga uu la galo ay wadaagaan. Kama heli jirin in uu makhaayadaha ku daaho, mana ahayn dadka ka hela ciyaarta turubka iyo waxa la midka ah… Sida qaalibka ahna waxa uu ku soo baashaali jiray goobaha wax lagu akhristo sida Majmaca Thaqaafiga oo aan sidaa uga fogayn guriga aan gallo.
Dalka aan wakhtigaa ku noolayn aad ayey cimiladiisu u kululayd, had iyo jeerna naftu waxa ay jeclayd in ay ka ag dhawaato AC-yada amma qaboojiye meel leh. Haddii kale waxa aad ku daalaysaa kulayka huurka wata ee dalkaa ka jira, oo aad moodayso in uu wadnaha kaa qabanayo….kaddibna aad ku hiinraagayso, maalintii ayeyna ugu sii darrayd. Marka dibadda la meeraysanayo fiidkii amma makhaayadaha la hor fadhiyo aad looma dareemi jirin kulaykaa….inkasta oo aad loo dhidido.
Xirsi waxa uu had iyo jeer xidhan-jiray Khamiiska dheer oo cad iyo macawis uga hoosaysa, garabkana cummad ayuu saaran jiray. Xataa marka uu shaqo tagayo sidaa ayey dhar xidhashadiisu ahayd. Laakiin xilliyada qaar waxa uu labbisan jiray surwaal, shaadh iyo dhar qurux badan, waxana uu ahaa nin dirays qaad badan.
Dalkaa waxa uu joogay muddo dheer, waxana uu u shaqayn jiray wasaaradda waxbarashada oo uu macallin ka ahaa. Intii uu dalkaa joogayna waxa uu ka soo shaqeeyey meelo badan. Oo uu xirfaddiisa aqooneed kaga soo shaqeeyey.
Asxaabta aan guriga wada gallaana waxa ay ka shaqayn jireen shirkadaha Bartoolka iyo Minashiibiyada. Waxana ay raggaasi dhammaantood wada ahaayeen solane, dhaqan ahaanna gooni socod ah ayey ahaayeen. Laakiin marka uu Xirsi sheekaynayo amma guriga joogo waxa ay u egaayeen niman bulsha ah kaftanka iyo qosolka ayaana badnaa. Marka aan dib u eegana Xirsi sheekadiisu waxa ay u ahayd caafimaad, oo way ku furfuran jireen. Iyaguna waxa ay isku dayi jireen in ay markooda sheekeeyaan. Inkasta oo aanay sida Xirsi aftahan u ahayn.
Sheekada xirsi mid ka mid ah oo uu maalin nooga sheekeeyey ayaa waxa uu yidhi, ‘ Waxan ku noolaa baadiyaha Dilla, meel la yidhaa Wacays Dhukur, waxanan xilligaa galay dugsiga oo aan ka mid ahaa fasalkii ugu horreeyey ee Dugsiga Hoose ee Dilla. Sannadkuna waxa uu ahaa 1958kii. Sida badan subaxdii waxa aan toos u tegi jiray Schoolka, marka aan dhammeeyana waxa aan toos ugu soo noqon jiray reerkayaga oo aan hawsha reerka qayb ka qaadan jiray. Sida badan asxaabta aan isku degaanka nahay ee aan schoolka kuwada kallahnaa waxa ay ku yara leexan jireen Dilla oo wakhtigaa ahayd tuula yar, laakiin dhawr maqaaxiyood iyo tukaannaba lahayd.
Xilliga fursada ahna waxa ay u dhaadhici jireen Magaalada. Laakiin anigu inta aan fasalka ka soo baxo ayaan buuggayga dibadda ku akhrisan jiray. Waxanan ahaa nin waxbarashada ku fahmo badan. Tartankana ayaan jeclaa, oo ragga iga waaweyn oo aad ugu fiicnaa carabiga ayaan ka cabsi qabay in ay imtixaanka iga horreeyaan.
Gaadiidka magaalada soo maraa, ma badnayn, laba gaadhi amma saddex ayaa maalintii soo mari jiray, balse gaadiidka waaweyni mid amma laba ayuu noqonayey. Sheedda oo aan ka arko mooyee, weligay ma fuulin gaadhi. Muraad aan u raacaana maba jirin. Xiiliyada aan Qadawga xoolaha geynaynana waxa aan gaadiid ka dhigan jirnay awr, dameero iyo fardaha. Saaxiibbadayda aan schoolka kuwada jirnaana waxaba ay u badnaayeen fardo fuul.
Waxa iigu qosol badan marka aan dib u eego xillaa iyo saaxiibbaday, oo marka laga sheekaynayo amma reer Borama ay reer Dilla kula kaftamayaan. Tusaale ahaan, maalmihii ugu horreysey ayaa markii aan fasalkii isugu nimid mid ka mid ah ardaydayadii uu u adkaysan waayey buuqii ardayda, markaasi ayuu u tagay macallin ka mid ah macallimiinta, waxana uu ku yidhi, ‘ Sheekh culimadii way buuqayaan, oo waxba kama akhrisan karno’. Illayn ragga waaweyn oo dhammi waxa ay ka mid ahaayeen, xertii kutubka ka raacan jirtay Sh. Omer Goth. Oo uu Sheekh Omer dhammaantoodba schoolka wada qoray.
La soco sheekada qaybta labaad.
This post has been viewed 5605 times.	Categories: Daily Somali News, OPINION